Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah / Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah
Sidan ayaad u codsanaysaa sharci deganaansho in laguu dheereeyo
Haddii aanad codsan dheeraynta sharciga deganaansho wakhtigii loogu talogalay
Haddii aanad codsan dheeraynta sharciga deganaansho ka hor intaan sharcigaagi hore dhamaan markaas ma laguu oggola inaad shaqayso wakhtiga aad sugayso go'aan. Waxaa kale oo aad khatar ugu jirtaa inaad weydo faa'iidooyin cayiman, tusaale ahaan taageerada sal dhigashada, kaalmada waxbarasho ama gunnada waalidnimo.
Haddii aad wax barato dhinaca heerka dugsiga sare
Marka aad dhamaysato waxbarashadaada dugsiga sare waxaad codsan kartaa sharci deganaansho oo joogto ah haddii aad shaqayso lacag kugu filan oo aad isku dabari karto.
Codso sharciga deganaansho ee joogtada ah
Si aad u hesho sharci deggenaansho oo joogto ah waxaa shuruud u ah inaad:
buuxiso shuruudaha loogu talogalay sii wadista sharciga deggenaanshada,
haysatay sharci deggenaansho ugu yaraan saddex sano,
aad awooddo inad is masruufto,
ku nooleyd nolol dhowrsan.
Akhri dheeraad ku saabsan waxa shuruud u ah si loo codsado sharciga deganaansho ee joogtada ah kuna qoran bogga Hey'ada Socdaalka.